Wararka Maanta: Arbaco, Feb 10, 2010-Duqeyn loo geystya Degmooyin ka tirsan Magaalada Muqdisho oo sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay Dad rayid ah
Duqeyn loo geystya Degmooyin ka tirsan Magaalada Muqdisho oo sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay Dad rayid ah Arbaco, 10 Feb, 2010 (HOL) Ku dhawaad 10-qof ayaa ku dhintay madaafiic ku dhacay degmooyinka Gobolka Banaadir qaarkood iyo suuqa weyn ee Bakaaraha, iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 37-qof.
Dadka ugu badan ee madaafiicda wax ku noqday ayaa ku sugnaa suuqa Bakaaraha halkaasoo ay ku dhaceen dhowr madfac oo isdaba-joog ah, waxaana madaafiicdu ay ku dhaceen agagaarka shirkadaha Isgaarsiinta iyo kuwa Xawaaladaha.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in labo gaadiidka rakaabka qaada ah ay ku dhaceen laba madfac oo waaweyn, iyadoo dadkii la socday ay gaareen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
"Dhaawacyada aan ka qaadnay goobihii ay madaafiicdu ku dhacday waxay ahaayeen 37-qof oo isugu jiray haween iyo rag, waxayna qaarkood qabeen dhaawacyo culus" ayuu yiri Cali Muuse oo ah madaxa Hay'adda Amublance-yada Muqdisho.
Xaafadaha ay dadka badan ku dhinteen ayaa waxay ka tirsan yihiin degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Yaaqshiid, Huriwaa, Boondheere, C/casiis iyo Kaaraan oo dhamaantood ku yaalla koonfurta iyo waqooyiga Magaalada Muqdisho.
Duqeymahan ayaa jawaab u ahaa madaafiic lala beegsaday saldhgiyada ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin Muqdisho iyo xarumo dowladda ay leedahay, waxaana madaafiicda jawaabta ah laga tuurayay saldhigyada AMISOM.
Qoriga maanta lagu duqeeyay Muqdisho ayaa wuxuu ahaa midka loo yaqaan BM-ka, sida ay sheegeen quburo ku xeel-dheer hubka, iyadoo duqeyntan ay imaanayso xilli ay Muqdisho ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Sabti, Feb.6,2010 Columbus, Ohio (HOL): Xaflad soo dhaweeyn ah oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda Ohio State University iyo Jaaliyadda Somaaliyeed ee Columbus ayaa si wada jir ah ugu soo dhaweeyay magaaladda Columbus wasiir dawlaha arimaha gudaha ee dawladda Somalia mudane Abdirashid Mohamed Xidig Xawaaladda Amal Express xarunteeda Kismaayo oo dib loo furay kaddib hal maalin oo ay xirnayd 2/10/2010 11:13 AM EST